Vivo Z1 Pro: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Vivo Z1 Pro: ny marika afovoany vaovao an'ny marika
Manana herinandro be atao i Vivo raha ny amin'ny famelabelarana. Ny marika sinoa nandao antsika izy omaly niaraka tamin'ny IQOO Neo, ny telefaona lalao vaovao avy amin'ny marika faharoa. Ankehitriny dia mitondra maodely ho antsika izy ireo eo ambanin'ny marika nomen'izy ireo manokana, natao ho an'ny antonony antonony. Momba ny Vivo Z1 Pro izany, izay efa ofisialy, aseho any India.
Ity Vivo Z1 Pro dia fanavaozana ny Z1 fantatry ny marika. Avelany amina andiam-panatsarana ao izahay. Betsaka amin'ny antsipirian'ny telefaona efa tafaporitsaka izy ireo teo aloha, mba hahafahantsika mahazo mamantatra izay antenaina amin'ity fitaovana ity. Ofisialy ihany amin'ny farany.
Ho an'ny famolavolana, ny marika dia nanatevin-daharana ny iray amin'ireo fironana amin'ny taona. Nisafidy efijery misy lavaka izy ireo, amin'ity indray mitoraka ity dia hita eo amin'ny ilany ankavanana ambony amin'ny efijery. Loaka somary malina, izay ahafahan'ny efijery manararaotra manoloana ny fitaovana amin'ny fomba miavaka. Ao ambadiky ny fakantsary telo miandry antsika, zavatra efa mahazatra eo afovoany,
1 Famaritana Vivo Z1 Pro
Famaritana Vivo Z1 Pro
Ity telefaona ity dia natomboka tao anatin'ny elanelam-potoana premium, misaotra ny fisian'ny Snapdragon 712 ho mpikirakira azy. Ny marika sinoa dia iray amin'ireo voalohany nampiasa an'io puce io tamin'ny findainy. Izy io dia processeur izay hanome antsika fahombiazana tsara amin'ny telefaona. Ho fanampin'izay, ny endri-javatra sisa dia tsy handiso fanantenana mihitsy. Ireto ny andinindinin'ny telefaona:
efijery: IPS / LCD 6,53-inch miaraka amin'ny FullHD + Resolution (2340 x 1080 teboka) ary 19,5: 9 tahan'ny
Fitahirizana anatiny: 64/128 GB (azo esorina amin'ny karatra microSD)
Fakan-tsary Rear: 16 + 8 + 2 MP misy tselatra LED
bateria: 5.000 mAh misy fiampangana haingana 18 W
Rafitra fandidiana: Android Pie miaraka amin'ny FunTouch OS 9.0
Conectividad: WiFi 802.11 a / c, Bluetooth, 4G / LTE, Dual SIM, Headphone Jack, USB
lafiny: 162, 39 x 77,33 x 8,85 mm
lanja: 201 grama
Toy ny efa fahita eny an-tsena, tonga ny telefaona amin'ny efijery lehibe, mihoatra ny 6,5 santimetatra amin'ity tranga ity. Izy io dia mampiasa tontonana LCD / IPS ao anatiny, izay manome antsika kalitaon'ny sary tsara. Ny processeur an'ny safidy ho an'ny Vivo Z1 Pro dia ny Snapdragon 712, araka ny efa noresahinay. Io no chip vaovao an'ny marika ao amin'ny elanelam-potoana premium, iray amin'ireo mpandimby 710. Miaraka amin'ny fitambarana RAM sy fitehirizana anatiny izany.
Ny fakantsary fakan-tsary dia iray amin'ny tanjany. Fampiarahana sensor telo no nampiasaina, miaraka amina sensor 16 MP lehibe misy aperture f / 1.78, zoro faharoa 8 MP misy zoro f / 2.2 ary ny fahatelo dia sensor ToF 2 MP, miaraka amina f aperture. /2.4. Ny fakantsary rehetra amin'ny telefaona dia entin'ny faharanitan-tsaina artifisialy. Fakan-tsary 32 MP no nampiasaina tao amin'ny sensor teo aloha.
Ankoatra izany, ity Vivo Z1 Pro dia tonga miaraka amina bateria lehibe, Fahaiza-miaina 5.000 mAh. Izy io dia hanome antsika fahaleovan-tena tsara amin'ny fotoana rehetra, izay tsy isalasalana fa singa manan-danja. Mahita fantsom-panafody isika, hita amin'ity tranga ity ao ambadiky ny telefaona.
Vivo Z5x: telefaona voalohany an'ny marika misy loaka eo amin'ny efijery
Mahita kinova telo amin'ity telefaona marika ity izahay. Amin'izao fotoana izao dia tany India ihany no naseho, izay hamidy izany amin'ny 11 Jolay. Tsy manana fampahalalana momba ny fandefasana azy ivelan'i India amin'izao fotoana izao izahay. Na dia mieritreritra aza fa ny marika dia zara raha misy any Eropa, dia azo inoana fa tsy halefa izy io.
Navoaka tamin'ny loko manga, mainty ary turquoise ny telefaona misy effets gradient. Ho fanampin'izany, mahita safidy maromaro amin'ny resaka RAM sy fitahirizana an'ity Vivo Z1 Pro ity izahay. Efa fantatray ny vidin'izy ireo any India, izay manaraka ireto:
Ilay maodely misy 4/64 GB dia mitentina 15.990 ropia (eo amin'ny 205 euro eo ho eo no miova)
Ny kinova miaraka amin'ny 6/64 GB dia manana vidiny 17.990 rupees (eo amin'ny 230 euro novaina)
Ilay maodely misy 6/128 GB dia mitentina 20.990 270 ropia (eo amin'ny XNUMX euro eo ho eo no miova)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Vivo Z1 Pro: ny marika afovoany vaovao an'ny marika
Vonona ny fanavaozana ny Galaxy Fold: Ireo no fanovana azy
Samsung dia nanomboka ny famokarana ny Galaxy M30s: ny volana aprily ho avy izao no hatao ny volana aogositra